Galmudug oo ka hadashay weerarkii Al-shabaab ee Bacaadweyn – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Galmudug oo ka hadashay weerarkii Al-shabaab ee Bacaadweyn
Wasaaradda amniga Maamulka Galmudug ayaa ka hadashay dagaal xoogan oo saakay dhexmaray Ciidanka dowladda Federaalka, kuwa Galmudug iyo Al-shabaab, kaasi oo ka dhacay deegaanka Bacaadweyne ee Gobolka Mudug.
Dagaalkan ayaa bilowday, kadib markii rag hubeysan oo ka tirsan Al-shabaab ay weerar dhowr jiho ah ku qaadeen Saldhig Ciidanka dowladda iyo kuwa Galmudug ay ku leeyihiin deegaanka Bacaadweyn, sidaasina uu ku dhacay dagaalka khasaaro kala geystay.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda amniga Galmudug ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidanka ay weerarkii kaga yimid Al-shabaab ay iska difaaceen, isla markaana khasaaro ku gaarsiiyeen Shabaab, waa sida hadalka loo dhigay.
Sidoo kale Qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in Bacaadweyne ay ku sugan yihiin Ciidanka dowladda, in kastoo aysan bixin faah faahin intaas ka badan iyo khasaaraha ka dhashay dagaalka.
“Ciidamada XDS iyo ciidamo deegaanka Bacaadweyne ee gobolka Mudug ayaa khasaaro gaarsiiyey Al-shabaab oo weerar ku soo qaaday Degmada Bacaadweyne iyo agagaarkeeda, waxaana hadda ciidanku ay eryanayaan Al-shabaabkii weerarka soo qaaday, ayadoo ciidamo gurmad ahi ay soo gaareen Bacaadweyne” ayuu lagu yiri Qoraalka.
War qoraal ah oo lagu faafiyay baraha dhinaca Internet-ka Al-shabaab ayaa waxaa ay sheegteen inay dagaal kula wareegeen gacan ku heynta Bacaadweyn, isla markaana gacanta ay ku dhigeen illaa 5 gaari oo nuuca dagaalka ah.
Sidoo kale Shabaabka ayaa sheegtay in hubka iyo gaadiidka ay la wareegeen ay kamid yihiin qoriga Soomaalida u taqaano Zuuga, laba gaari oo Tikniko oo dhashiike saaranyahay iyo gaari kale oo uu ku rakibanyahay qoriga B10-ka.
Ilaa iyo hadda ma jiro cid si rasmi ah u xaqiijinta khasaaraha ka dhashay weerarkii ka dhacay deegaanka Bacaadweyn, wallow Galmudug iyo Al-shabaab ay guulo ka sheegteen weerarkii saakay.
Xildhibaano ku Eedeyay Guddoomiyaha Barlamaanka Puntland inuu afduubtay Golaha